Paositra Goldcrest sy Mpanolotsaina CinePointe hametraka atrikasa amin'ny fandefasana sarimihetsika - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Post Goldcrest sy Mpanolotsaina CinePointe hametraka atrikasa momba ny fandefasana sarimihetsika
Post Goldcrest sy Mpanolotsaina CinePointe hametraka atrikasa momba ny fandefasana sarimihetsika
Hetsika in-droa ho an'ny mpamokatra horonantsary sy horonantsary nokarakaraina tamin'ny oktobra 22 sy 29.
Ny tanàna vaovao YORK - Mpanolotsaina Goldcrest sy ny CinePointe Advisors dia hamahana ny fomba fiomanana amin'ny fizarana horonantsary hozaraina amin'ny atrikasa manokana 2-alina mitondra ny lohateny Fampisehoana fanaterana sarimihetsika: izay tokony ho fantatry ny mpamokatra rehetra. Voalamina ho an'ny Oktobra 22 sy 29 ao amin'ny Goldcrest Post any New York, ny atrikasa dia mikendry ny mpamokatra horonantsary sy horonantsary sy ny hafa tompon'andraikitra amin'ny famatsiam-bola sy ny fanaraha-maso sarimihetsika mandritra ny alehany amin'ny famokarana lahatsoratra.
Ny sosiana dia hanome fahitana momba ny lafiny ara-dalàna, ara-teknika ary ara-batana amin'ny famoahana sarimihetsika, manarona ireo lohahevitra toa an-dàlana toa ny fomba ifanakalozan-kevitra momba ny fifampidinihana momba ireo zava-mahadomelina momba ny fandefasana OTT. Ny mpitarika ny atrikasa dia hampiditra ny CinePointe Advisors Business and Financial Affairs Advace Stacey Smith, Goldcrest Films Head of Production Gretchen McGowan ary talen'ny fitantanana ny Goldcrest Domenic Rom.
Ireo atrikasa atrikasa dia:
Talata, Oktobra 22 (6: 30pm - 8: 30pm): Famintinana ny fandefasana sy ara-dalàna / fandefasana antontan-taratasy
Inona marina ny dikan'ny hoe "manolotra" horonantsary? Ny fandefasana no dingana lehibe sy farany ilaina hanomanana sarimihetsika hizara sy hahazoana karama. Ary na izany aza matetika dia averimberina matetika eo amin'ny teti-bolan'ny famokarana sy ny trano fiasana. Stacey Smith ao amin'ny CinePointe Advisors dia hamerina hijery ny foto-kevitra fandefasana, hanapaka ny fandaharam-potoana fandefasana, hanazava ny fomba ifanakalozan-kevitra momba ny fepetra momba ny fandefasana ireo mpaninjara hamonjy fotoana sy vola, ary hanome tari-dalana amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fanaterana ara-dalàna sy ny antontan-taratasy.
Talata, Oktobra 29 (6: 30pm - 8: 30pm): Fanaterana ara-batana sy ara-teknika
Manjary mihasarotra hatrany ny andraikitry ny mpamokatra noho ny fampidirana tsy an-kiato ny alàlan'ny fakantsary fakan-tsary vaovao sy ny fanodinana fanodinana OTT. Mandania hariva miaraka amin'ireo matihanina avy amin'ny Goldcrest Post izay hamerina ny lambam-baravarana amin'ny "majika" feo sy famoahana sary. Hanafoana ny fizotran'izy ireo amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana tanana izy ireo ary hanome toro-hevitra momba ny fomba famoahana ny tetikasanao amin'ny fotoana sy ny teti-bola.
Ny tapakila ho an'ny hetsika 2-alina dia $ 175.00. Voafetra ny seza. (Ireo mpamokatra dia nanoro hevitra mafy ny hanatrika ireo fivoriana roa ireo, fa ny seza voafetra dia mety hisy isak'alina isaky ny $ 99 tsirairay avy.) Ny mpikambana ao amin'ny New York Woman amin'ny Film & Televiziona dia mahazo fihenam-bidy 10%.
fisoratana anarana: www.eventbrite.com/e/demystifying-the-business-of-indie-film-producing-tickets-59717759426?aff=erellivmlt
Stacey Smith, Mpanolotsaina CinePointe
Amin'ny maha mpanatontosa mpamokatra sy orinasa mpamokatra, i Stacey Smith dia mitondra fomba fijery tokana amin'ny asa consultant an'ny raharahany. Stacey dia nanomboka ny fiaraha-miasa hatry ny ela niarahany tamin'ny tsy fantatra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mpanatontosa sarimihetsika Jim Jarmusch ao amin'ny 1997, ary mandritra ny taona 16 manaraka dia manara-maso ny famatsiam-bola, famokarana, fanaterana ary fizarana sarimihetsika ao anatin'izany ny COFFEE sy CIGARETTES, ny LIMITSAN'ny CONTROL sy ny FAMPIASANA BROKEN (mpandresy amin'ny Cannes Film Festival Grand Prix du Jury). Ao amin'ny CinePointe Advisors dia miara-miasa amin'ny mpamokatra izy mba hanomezana fandefasana milamina sy ara-potoana ary mahomby, ary manampy ny mpamokatra sy ny mpampiasa vola hitantana sy hampitombo ny vola amin'ny tetikasa mandritra ny famaritana fizarana.
Gretchen McGowan, Paositra Goldcrest
Gretchen McGowan dia mitarika famokarana horonantsary fitaterana an-tsary sy horonantsary ho an'ny Filma Goldcrest. Ny tetikasa farany dia misy an'i Todd Haynes 'CAROL (Cate Blanchett, Rooney Mara), Bill Monahan ary Atlas Entertainment's MOJAVE (Oscar Isaac, Garrett Hedlund), SLUMBER (The Maggie Q), The Tea Shop's SLUMBER (Maggie Q), Braveart Films' CARRIE PILBY (Nathan Lane, Bel Powley, Gabriel Byrne) sy ilay horonan-tsarin'ny ady tany Aostralia ho avy, DANGER FIDERANA: NY BATISAN'ny TANANA LONG TAN.
Talohan'ny nidirany tamin'ny Goldcrest, namokatra horonantsary mihoatra ny 25 i McGowan ho mpamokatra tsy miankina ary ho an'ny HDNet Films an'ny HDNet, Open City Films ary Blow Up Pictures. Tao amin'ny 2014, nahazo taratasy fahazoan-dàlana roa an'ny Emmy Award izy tamin'ny asany tao amin'ny horonantsary HBO, IZAY REHETRA IZAY DIA NANONANA AZY ETO? NY FIAINANA ARY TANY AN’NY TENY ETO.
Domenic Rom, Paositra Goldcrest
Fiarahana ela ao amin'ny vondrom-piarahamonina famokarana any New York, Domenic Rom dia nanatevin-daharana ny Goldcrest Post tamin'ny 2019. Amin'ny maha talen'ny fitantanana azy, izy no tompon'andraikitra amin'ny fandidiana ankapobeny, ny vina stratejika ary ny fandrindrana fitomboana.
Romana teo aloha dia filoham-pirenena sy tale jeneralin'ny Deluxe TV Post Production Services, taorian'ny fifandraisany tamin'ny talen'ny talen'ny Deluxe, New York. Izy dia filoha lefitra zokiolona tao amin'ny Technicolor Creative Services nandritra ny telo taona, ary mpanatanteraka tao amin'ny PostWorks nandritra ny 11 taona. I Rom dia nanomboka ny asany tamin'ny loko loko amin'ny Unitel Video. Niditra tao amin'ny Duart Film Labs izy taty aoriana, ary lasa filoha lefitry ny ekipa nomerika sy ny sarimihetsika.
Momba ny Mpanolotsaina CinePointe
CinePointe Advisors dia niorina tamin'ny finoana fa ny zavakanto filmmaking tsy maintsy tohanan'ny tetik'asa fandraharahana tsara mba hahomby amin'ny tsena mifaninana sy miova ankehitriny. Ny ekipanay dia miara-miasa amin'ny mpamatsy vola sy mpamokatra hanome ny fitarihana, fitaovana ary fanohanana ilaina amin'ny orin'asa mba ahafahan'ny fahitana mamorona ho lasa vokatra azo vidina.
Ny CinePointe dia manolotra serivisy miafara amin'ny endriny izay manohana tetikasa amin'ny andiany fahavelomana tanteraka, manome rafi-piasana mirindra izay mamelona ny fizotran'ny famoronana. Na raha miara-miasa amin'ny mpamokatra, orinasa famokarana, famatsiam-bola na famatsiam-bola fialamboly isika, dia manolotra serivisy mifanaraka amin'ny filàn'ny mpanjifa sy ny fepetra takian'ny mpanjifany ny CinePointe.
Goldcrest Post dia toeram-pamokarana manerantany, tsy miankina, manome vahaolana amin'ny famoronana endri-javatra ho an'ny filma, fahitalavitra episodika, fanadihadiana ary tetikasa hafa. Mahazo mipetraka tsara ao amin'ny Village Village West York ny orinasa, manolotra birao fanontam-pirinty, fananganana onjam-peo, sary mamarana, famoahana feo, ADR ary fampifangaroana, ary ireo tolotra mifandraika amin'izany. Anisan'ny tranga farany Rosiana Doll, Avo-be Flying Flying, Ny fofony, Miala tsiny amin'i Bother You, an-tapitrisany, fisaraham-panambadiana, tsy matanjaka, Ny Misedication ny Cameron Post; Juliet, Naked, rain-dohan'i Harlem, The Laundromat ary Ray.
Fampitana-SocialMeida Cobalt Encoder deliverables Distribution fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor orinasa zava-mitranga OTT lahatsoratra famokarana SJGolden - Spears & Arrows The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago TV Technology Ultra HD Forum	2019-10-09
Previous: Tale lehiben'ny injeniera / Teknolojia ara-teknika-OKC 191007-UNCB-118
Next: Mampiseho ny votoatin'ny AR Fahafaham-borona ny BTS World